ကျေးလက်ဒေသရှိမူလတန်းကျောင်းတစ်ခုတွင်လူသားကလေးများသည်နေ့အချိန်တွင်နေထိုင်ကြပြီးနဂါးကလေးများသည်ညအချိန်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ လူသားများရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သောနဂါးကလေးများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လျှို့ဝှက်ကျောင်းဘဝကိုဖန်တီးကြသည်။ တစ်နေ့မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကသူမရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုချန်ထားခဲ့ပြီးဘယ်တော့မှမတွေ့သင့်တဲ့နှစ်မျိုးကတော့တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကြုံတွေ့ရသည်။ လူသားမိန်းကလေးနှင့်နဂါးသည်မိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်မည်လော။
► Spookiz အကွာအဝေးကိုရှာဖွေပါ။ https: //teespring.com/stores/spookizw ...
► Spookiz ကိုကြည့်ရှုရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ: https: //www.youtube.com/watch? v = -roWI ...
►ရာသီ ၃ ဖြစ်စဉ်များကိုကြည့်ပါ။ https: //www.youtube.com/playlist? list ...
► Spookiz Cookie ကိုကြည့်ပါ။ http: //www.youtube.com/playlist? list ...
►စောင့်ကြည့်ရသောရာသီ ၁ အပိုင်းများ - http: //www.youtube.com/watch? v = y1Mfx ...
►စောင့်ကြည့်ရသောရာသီ ၂ အပိုင်းများ - http: //www.youtube.com/watch? v = 7xlqB ...
Spookiz သည် Keyring ကာတွန်းကားဖြစ်ပြီး Cula, Frankie နှင့်သူတို့၏သူငယ်ချင်းများကျောင်းတွင်ရှိနေစဉ်ဘဝ၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။
Cula သည် Dracula မိသားစုမှဆင်းသက်လာသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်သွေးအေး။ ဆိုးသောသူဖြစ်ဟန်တူသော်လည်းသူသည်အခြားသူများနှင့်ရင်းနှီးလို။ သူတို့၏မိတ်ဆွေဖြစ်လိုသည်။ သူ၌ OCD နှင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်မထင်မှတ်သောအရာတစ်ခုပါရှိသည်။ သူနဲ့သူ့ sidekick KongKong ကကောင်းတာမှမကောင်းတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကတကယ်စိတ်ဝိညာဉ်ပါပဲ။
Frankie ကမှေးမှိန်နေတဲ့ခပ်တုံးတုံးလေးပါ၊ တစ်ခါတလေ Frankie ရဲ့အစာစားချင်စိတ်ကသူ့ကိုသူ့ကိုနဂါးတစ်ကောင်လိုဖြစ်စေတယ်! သူဟာကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့သူ့ရဲ့ ဦး ခေါင်းထိပ်မှာအရွက်လေးညှပ်လေးကိုစိုက်ပျိုးတယ်။ သူသည် Spookiz ဂိုဏ်း၏အကြင်နာဆုံးအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်၊ သို့သော်သူသည်အပြည့်အဝမပြည့်စုံပါကသူ၏လိုချင်တောင့်တမှုသည်တစ်ခါတစ်ရံသူ့ကိုမုန်းတီးသည့်စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်စေသည်။
Kebi သည်လွတ်လပ်သောစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရန်မလိုအပ်ပါ။ သူဟာအမြဲတမ်းလုံ့လဝီရိယရှိပြီးစိတ်ပျက်စရာကောင်းပြီး Cula ကိုတတ်နိုင်သလောက်လှောင်ပြောင်ချင်တယ်။ သူတို့ဟာအမှန်တကယ်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများဖြစ်သောကြောင့်ဖော်ရွေသောပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။
KongKong သည် Cula ၏လမ်းလျှောက်သူ KongKong ဖြစ်သည်။ ခိုင်ခံ့သူအားအားနည်းသူ၊ အားနည်းသူများကိုအားကောင်းသောသူအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ သူဟာအရပ်ရှည်ရှည်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိပေမယ့် Cula ကိုနားထောင်ပြီးယုံကြည်ကိုးစားခြင်းအားဖြင့်သူဟာလုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။
Zizi ရှိုးပွဲတွေကအနံ့ဆိုးထွက်စေပေမဲ့သူမသိဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ (အဓိကအားဖြင့်သူမ၏ ဦး ခေါင်း) သည်သူမခန္ဓာကိုယ်နှင့်မကွာခဏပြိုကွဲသော်လည်း၊ သူမအပေါ်အမြဲတမ်းလွယ်ကူစွာပြန်လည်နေရာယူထားသည်။ သူမသည် Cula အပေါ်လျှို့ဝှက်နှိပ်စက်ခြင်းနှင့်သူနှင့်အတူအစဉ်အမြဲဖြစ်ခြင်း၏အိပ်မက်တွေရှိပါတယ်။ သူမသည်သူ့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အလွန်ရှက်ကြောက်နေပြီးမည်သူမဆိုယင်းကိုသိရန်မကြိုက်ပါ။
►ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook သို့ဝင်ရောက်ပါ။ http://www.facebook.com/spookizworld
►ကျွန်ုပ်တို့၏ Twitter သို့သွားပါ။ http://www.twitter.com/spookizworld
► Kekeing Studios မှသင့်အားယူဆောင်လာသည် - http://www.keyringstudio.com
#Spookiz: TheMovie #spookiz #spookizcartoon #spookizepisodes #kidscartoons #spookizmovie
အဆိုပါ Fixies ★လိမ်ရှာဖွေရေး | နောက်ထပ်အပြည့်အဝ★★ Fixies အင်္ဂလိပ် | ကလေးများအတွက်ဗွီဒီယိုများ
လှုပ်ရှားမှုအတွက်စူပါဟီးရိုးများ! | PJ မျက်နှာဖုံးများတရားဝင်
ကာတွန်း | Spookiz 45 မိနစ်စုစည်းခြင်း | Kids For Funny Videos ကလေးများအတွက်ဗီဒီယိုများ
Oggy & Zig & Sharko - ရာသီ ၂- အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးပြုစုပျိုးထောင်မှု - ကလေးများအတွက်ကာတွန်း - ၂၀၁၈ 💙
Winx Club - မှော်စွန့်စားမှု [FULL MOVIE]
Woody Woodpecker ပြပွဲ ဒီထိုင်ခုံကိုယူသည် ၁ နာရီစုစည်းခြင်း | ကလေးများအတွက်ကာတွန်းများ
Peppa ဝက်တရားဝင်ချန်နယ် | နေ့လည်စာ
ဆယ်ကျော်သက်ဖို့အတွက် Titans တွေက Go! | အရူး Rae | @DC ကလေးများ
Veggietales အပြည့်အဝအပိုင်း | ဘုရင်မဖြစ်လာတဲ့မိန်းကလေး | Larry နှင့်အတူရီစရာသီချင်းများ | ကလေးများအတွက်ဗွီဒီယိုများ
Ribbit - အပြည့်အဝရုပ်ရှင်
ဆယ်ကျော်သက်ဖို့အတွက် Titans တွေက Go! | အချစ်အက @DC ကလေးများ
Cula အပေါ်လက်စားချေ | Spookiz | ကလေးများအတွက်ကာတွန်းများ
ပီဇာသီချင်းနှင့်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးကလေးသီချင်းများ CoComelon Nursery Rhymes & Kids သီချင်းများ Moonbug ကလေးများ
Woody Woodpecker ပြပွဲ ငါနောက်ဆုံးညလုပ်ခဲ့တာငါသိတယ် | ၁ နာရီစုစည်းခြင်း | ကလေးများအတွက်ဗွီဒီယိုများ
ရဲ့ Blade ကို! | Spookiz ကွတ်ကီး | ကလေးများအတွက်ကာတွန်းများ
#Easter Octonauts - နွေ ဦး ပေါက်မွေး | 90 မိုင် + အထူး! | ကလေးများအတွက်ကာတွန်းများ | ရေအောက်ပညာရေး
ကာတွန်းကာတွန်း | Spookiz Cula သည်ကျောင်းပြဇာတ်တွင်ပါသောကြောက်စရာ Wizard | ကလေးများအတွက်ကာတွန်း
ဝူး ဦး! 💸 | ဇာတ်လမ်းအပြည့် | DuckTales | ဒစ္စနေး Channel ကို